စျေးပေါသော Semi-Auto အပူလွှဲပြောင်းမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းလိုင်းထောက်ပံ့သူများနှင့်စက်ရုံ။ | VTEX အုပ်စု
၁။ လျှောက်လွှာအဆင့် -
ပလတ်စတစ်၊ သတ္တု၊ ဖန်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောထုတ်ကုန်များပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သည်။
၁.၂ ။ အင်္ဂါရပ်များ:
၁.၂.၁ သံမဏိလုပ်ငန်းခွင်စားပွဲ၊ ရှေ့နှင့်ညာ - ဘယ်ဘက်အူညှိညှိနှိုင်း။ လျင်မြန်ပြီးရိုးရှင်းစွာပုံနှိပ်ခြင်း။
၁.၂.၂ ထိန်းချုပ်နည်းစနစ်သုံးမျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်သည် - လက်စွဲ၊ တစ်ခုတည်း၊ အလိုအလျောက်
၁.၂.၃ Varity မှင်နှင့်ကိုက်ညီရန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံနှိပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အတွက်ခြစ်ခြင်းနှင့်မှင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအချပ်ကိုညာဘက်သို့မဟုတ်ဘယ်ဘက်တွင်ရပ်ရန်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
၁.၂.၄ နာမည်ကြီးထုတ်လုပ်သူများ၊ တင်သွင်းသောမော်တာနှင့် PLC မှထုတ်လုပ်သောအလွန်ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်ဒြပ်စင်များကိုလက်ခံခြင်း။ မြင့်မားသောတိကျသည့်ကြိတ်ခွဲထားသော linear လမ်းညွှန်သည်စက်၏ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေခြင်းနှင့်စက်၏ dura billity ကိုအာမခံသည်။
Max.Printing မြန်နှုန်း ၁၃ / မိနစ်
လေဖိအား 3HP၊ ၅.၅-၇.၇kg / cm2
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 380V, 2KW
ယေဘုယျအရွယ်အစား 1600mm * 1060mm * 1680mm
အလေးချိန် 580 ကီလိုဂရမ် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်)
Case အရောင် အဖြူ / အပြာ
ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအတွက်အခြားအရွယ်အစားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် pls အစား actural ထုတ်ကုန်ကိုလိုက်နာ။
3. စစ်ဆင်ရေး Panel ကိုဖော်ပြချက်
ပုံနှိပ် squeegee များအတွက် Barometer
မီးဖို ON / Off
၄.၁ စက်ကိုရှင်းလင်းသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တပ်ဆင်သင့်ပြီးအပူချိန်ကို ၁၈-၂၈ ဒီဂရီတွင်ထားသင့်သည်။
၄.၂ စွဲစေစစ်ဆေးမှုကိုကောင်းစွာစစ်ဆေးနိုင်ပြီးသစ်သားသေတ္တာကိုဖွင့်ပြီးနောက်ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းသည်ချောဆီကိုရရှိသည်။ စက်အတွက်ကောင်းစွာတပ်ဆင်ရန်နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ ရော်ဘာ ၄ ကိုခြေထောက်နှင့် ကပ်၍ ညှိပါ။ အလုပ်စားပွဲကိုအလျားလိုက်ထားပါ။ မြေပြင်ဝါယာကြိုးစက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရပါမည်။
၄.၃ နှစ်ရောင်စုံဝါယာကြိုးသည်မြေပြင်ကြိုးဖြစ်ပြီးအခြားသူများမှာမီးဝါယာကြိုးများဖြစ်သည်။ ဝါယာကြိုးများကောင်းစွာချိတ်ဆက်ပြီးနောက်။ 'Manual Mode' သို့ 'Operation Mode' ကိုနှိပ်ပါ။
'Air Suction Mode' ကိုနှိပ်ပါ။
ပါဝါကိုဖွင့်ပါ (ပုံ ၁-၄ ကိုကြည့်ပါ) ။ 'Safety Valve' ကိုဖွင့်ပါ။
ဒါကပန်ကာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ စက္ကူသည်အလုပ်လုပ်နေသည့်စားပွဲပေါ်မှာစုပ်ယူခဲ့ပါကမျက်နှာပြင်စက္ကူကိုအလုပ်စားပွဲပေါ်တွင်ထားပါ။ ဆိုလိုသည်မှာဝါယာကြိုးများမှန်ကန်မှုရှိသည်။ အကယ်၍ စက္ကူကိုလေဖြင့်မှုတ်ထုတ်လျှင်၊ အကယ်၍ ပါဝါမီးဝါယာကြိုးသည်အဆင့်တွင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်၊
4.4 စက်၏လေဖိအားသည် ၅.၅ ~ ၇ ကီလိုဂရမ် / စင်တီမီတာဖြစ်သည်2။ အကယ်၍ လေဖိအားသည်အရေအတွက်ထက်နိမ့်ပါကချိန်ညှိမှုကိုဆွဲထုတ်ပါ၊ လက်ယာရစ်ဖြင့်ဖွင့်ပါ၊ လက်ယာရစ်လက်ယာရစ်ဖြင့်လေဖိအားကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
၄.၀ 'Manual Mode' သို့ 'Operation Mode' ကိုနှိပ်ပါ။ စက်ကိုတက်၊ အောက်၊ ဘယ်၊
'Scraping conversion' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး scraper ကိုစမ်းသပ်ပါ။
သတိပြုရန် - အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးသည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်အထိနောက်ထပ်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုမလုပ်နိုင်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်စက်ပျက်စီးစေလိမ့်မည်
၄.၆.၁ 'Operation mode' ကို 'Single' သို့ နှိပ်၍ ခြေနင်းကိုတွန်းပါ၊ ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်နှိပ်ပြီးပါက ၄.၆.၁ ။
၄.၆.၂ 'Rapid Oil Return button' ကိုနှိပ်ပါ
Down - Scraper ဘယ်ဘက်ရှိလှုပ်ရှားမှု၊
၄.၆.၃ 'ဒုတိယပုံနှိပ်ခြင်း' ကိုနှိပ်ပါ။ လှုပ်ရှားမှုမှာ
အောက် - Scraper ဘယ်ဘက်လှုပ်ရှားမှု - ညာ - - ဘယ် - ညာ - အပေါ်သို့
၄.၆.၄ 'Operation mode' ကို နှိပ်၍ Timer Control KT (0 ~ 10S) ကိုနှိပ်ပါ။ စက်သည်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ပြီးစီးစေသည်။ (အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအလုပ်သမားအတွက်သင့်တော်သည်။ ခြေနင်းအစား)
5.1.Install နှင့် Net Frame ကို Adjust
'Offer Air' (ပုံ ၁.၃၅ ကဲ့သို့) ကိုဖွင့်ပြီး Scraper ကိုချပြီး Net Frame Arm screw (ပုံ1.9ကဲ့သို့) ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။ နှစ်ဖက်စလုံးရှိ Net Frame Arm ကိုပုံ (၂.၂.၂၅ ကဲ့သို့) ချိန်ညှိ။ Net Frame ကို Clamp သို့တပ်ဆင်ပါ။ (picture1.29 အဖြစ်) ။ ပြီးစီးခဲ့, အဝက်အူတင်းကျပ်။ (ပုံ ၁.၉ အရ)
၅.၂ ။ ပုံနှိပ်ခြင်းအရွယ်အစားကိုချိန်ညှိပါ။
သင်၏တောင်းဆိုချက်အရပုံနှိပ်ခြင်းအကျယ်ကိုချိန်ညှိရန်ပရင့်ထုတ်စက်ရာဘာကိုအစားထိုးပါ။ (picture1.33 အဖြစ်) ။
ပုံနှိပ်ခြင်း၏အရှည်ကိုချိန်ညှိပါ။ (ပုံ ၁.၁၁ အရ) ချည် ၂ ချည်များ၊ ဘယ်ဖက်နှင့်ညာဘက်ကိုသင့်တော်သောနေရာနှင့်ညှိပါ။ အဆိုပါဝက်အူတင်းကျပ်စွာ။
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆီပြန်ပို့ခြင်းအမြန်နှုန်း (ပုံ ၃ ကဲ့သို့) 'ပုံနှိပ်ခြင်းမြန်နှုန်း' ကိုသင့်တော်သောအမြန်နှုန်းနှင့်ညှိပါ။
က။ အလှည့်: အလှည့်ကိုထိန်းညှိရန် (picture1.24 ကဲ့သို့)4screw နှစ်ခုလွှတ်လိုက်ပါ။
ခ။ စင်ပြိုင်ပြောင်းလဲမှု - ခြစ်ခြင်းကိုထိန်းထားရန်နှင့် Net Frame မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဆီဓားကိုအပြိုင်ပြန်ပေးရန် (ပုံ ၁.၁.12 ကဲ့သို့) screw နှစ်ခု ၄ ခုကိုချိန်ညှိပါ။
ဂ။ Speed: Scraper နှင့်ဆီပြန်လာသည့်ဓါးတို့၏အရှိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ညာဘက်တွင် (ပုံ ၁.၁.12 ကဲ့သို့) ဝက်အူ ၄ ခုကိုချိန်ညှိပါ။ ခြစ်ရာ၏အမြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန် 'ပုံနှိပ်ခြင်းမြန်နှုန်း' ကိုညှိပါ။
။ ခြစ်များအတွက်ဖိအား: (picture1.38 ကဲ့သို့) ခြစ်၏ဖိအားကိုထိန်းချုပ်ရန် (picture1.39 ကဲ့သို့) ဖိအားအဆို့ရှင် Adjust ။ Barometer မှနံပါတ်ကိုဖတ်ပါ။
င။ ခြစ်ရာနှင့်ဆီပြန်လာသည့်ဓါးကိုထုတ်ရန် (ပုံ ၃.၁၉ ကဲ့သို့) လက်ကိုင် 'Printing head' ကိုဆွဲထုတ်ပါ။ ခြစ်ပြီးဆီပြန်လာသည့်ဓါးကိုတပ်ဆင်ပြီး 'print head' ကိုနှိပ်ပါ။
၅.၄ ။ Net Frame နှင့် worktable ကြားရှိအမြင့်ကိုညှိပါ။ စက်၏နောက်ဖက်တွင်တံခါးဖွင့်ပါ။
ဝက်အူကိုဖြေပါ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံကိုကြည့်ပါ) လှံတံကိုနာရီလက်တံဆန့်ကျင်ထားသည့်လမ်းကြောင်းသို့တက်ပါ၊ လှံတံကိုလက်ယာရစ်ဘက်သို့အောက်သို့လှည့်ပါ။
မဟုတ်ဘူး။ နာမည် မဟုတ်ဘူး။ နာမည်
နင်း switch ကိုများအတွက် adapter
ခြစ်များအတွက် Air စည်
မှင်ဓား Lock Lock
Net Frame ၏လက်
Worktable များအတွက် Micro ချိန်ညှိ
Lift Net Frame အတွက်မဏ္ိုင်
Worktable Lock ကိုဝက်အူ
Lift Net Frame အတွက် Speed ​​Adjustor
အသားတင် Frame ကိုအလှည့်ညှိ
ပိုက်ကွန် Frame Air Drum ကိုဖယ်ရှားပါ
ဝက်အူ Adjusted Net Frame အမြင့်
Net Frame ကိုတင်းကျပ်ရန်ဝက်အူ
Net Frame လက်ဝဲ & ညာဘက် Adjustments ဝက်အူ
၆.၁ ။ စားပွဲပေါ်ရှိစုပ်ယူခြင်းအပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ထားသောမှင်နှင့်အော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းများကိုရှောင်ပါ။
၆.၂ ။ အလုပ်လုပ်သောအဆိုင်းတိုင်းကိုမှတ်တိုင်ပေါ်တွင်အင်ဂျင်ဝိုင် ၁၀ # အနည်းငယ်ကိုချထားပါ။
၆.၃ ။ စက်တွင်ဆီအငွေ့ပေါင်းစပ်စက်ရှိသည် (ပုံ ၂ ကိုကြည့်ပါ) ။
၆.၄ ။ (ပုံ ၂.၇ ကဲ့သို့) Filter ကိုသန့်ရှင်းပါ။ လေကိုကမ်းလှမ်းပါ၊ ရေဘူးကိုဖွင့်ပါ (ပုံ ၂.၈ ကဲ့သို့) ။
ရေမြှုပ်ကိုရေခွက် (ပုံ ၂.၇ တွင်ကဲ့သို့) အကြိမ်ရေတွင်ဆေးပါ။ ရေမြှုပ်ကိုထုတ်ယူပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကိုစင်ကြယ်သောရေ၌ ထား၍ ခြောက်သွေ့ပါ။
၂။ Screwdriver2pcs၊ ၁၀ 'Spanner၊ hex Spanner, Rob
3.4ရော်ဘာခြေလျင်
4. ခြစ်ခြင်းနှင့်မှင်ပြန်လာဓါး 350, 400
ရိုးရာလက်ဖြင့်အစားထိုးသည့်နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်းကိရိယာများ။ ဤစက်သည်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်၊ ထိရောက်သော၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကင်းဝေးခြင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအသုံးချခြင်းအပြင်လှပသောရုပ်ပုံများကိုထုတ်လုပ်သည်။
ဤစက်တွင်အမှုန့်နို့စို့ခြင်း၊ transducer စသည့်အဓိကကျသည့်နေရာများအတွက်တာရှည်ခံ။ တည်ငြိမ်သောအားသာချက်များဖြင့်တင်သွင်းသည်။ အထူးသဖြင့်ဤစက်သည်စက္ကူ၊ ရုပ်ရှင်၊ တောက်ပမှုနှင့်ပူသောအရည်ပျော်မှုအမှုန့်များလိုအပ်သောသူများနှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဒီစက်မှာရှိတဲ့ drives တွေအားလုံးဟာအဆုံးမဲ့မြန်နှုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်။ လိုအပ်ပါက၎င်းသည်ခြောက်သွေ့စေသောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သုံးကုသသည့်ကိရိယာများနှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။
မော်ဒယ် စုစုပေါင်းပါဝါ ဂီယာခါးပတ်အကျယ် အမှုန့်၏အကျယ် စက္ကူအထူ ယေဘုယျအရွယ်အစား မြန်နှုန်း (ပီစီ / နာရီ)
ZSCT-II ကို 4.5KW 1000 (mm) 900 (mm) ၁-၅ (မီလီမီတာ) 2000 * 1700 * 2000 2000
နွေးထွေးသောသတိပေးချက် - အမှုန့်သည်ရုပ်ရှင်မပြီးမချင်းပြန့်ကျဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ အာရုံခံကိရိယာ။
ဤစက်သည်ပါဝါအထက်သို့နှင့်အောက်သို့စုပ်ယူရန်အတွက်သီးခြားခလုတ်များ၊ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ အမှုန့်အစာကျွေးခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကြားနေမှုကြားခံနှစ်ခုလုံးအတွက်တပ်ဆင်ထားသည်။
ပါဝါခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ (ပုံ II-2 ကိုကြည့်ပါ) ။
အထက်သို့ပါဝါနို့စို့နေသောမော်တာကိုဖွင့်ပါ (ပုံ II-8 ကိုကြည့်ပါ) နှင့် transducer ၏ကြိမ်နှုန်းကို 38-42HZ မှတရားမျှတပါ။
အောက်ဘက်မှပါဝါစုပ်ယူသောမော်တာကိုဖွင့်ပါ (ပုံ II-11 ကိုကြည့်ပါ) နှင့် transducer ၏ကြိမ်နှုန်းကို 55-65HZ သို့ချိန်ညှိပါ။
ပေးပို့ပါဝါကိုဖွင့်ပါ (ပုံ II-4 ကိုကြည့်ပါ) နှင့် switch ကို 20-65HZ သို့ချိန်ညှိပါ။
အမှုန့်တိုက်ကျွေးသောညှိနှိုင်းစက်ကိုဖွင့်ပါ (ပုံ II-15 ကိုကြည့်ပါ) နှင့် 20-65HZ သို့ switch ကိုချိန်ညှိပါ။
ပူပြင်းသည့်အရည်ပျော်မှုန့်များကိုဖုန်ထဲသို့ထည့်ပြီးနောက်ဖုန်မှုန့်မော်တာကိုဖွင့်ပါ (ပုံ II-17 ကိုကြည့်ပါ) ။ ပထမ ဦး စွာဖုန်မှုန်မှုနှုန်း (ပိုမိုမြန်လေလေအမှုန့်များ) ကိုချိန်ညှိပါ။ သို့မဟုတ်အမှုန့် (၃) ခုအောက်ရှိအမှုန့်များကိုအမှုန့်ပမာဏမျှတစေရန် (ပုံ I-4 ကိုကြည့်ပါ) ချိန်ညှိနိုင်သည်။
လက်ဝဲဘက်အမှုန့် (ပုံ II-၂၁ တွင်ကြည့်ပါ) အမှုန့်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်သည်။ အများအားဖြင့်၎င်းသည် ၆၀ မှ ၇၀ အထိရှိသည်။
electrostatic neutralizer switch ကိုဖွင့်ပါ (ပုံ II၊ ၁၃ ကိုကြည့်ပါ)
1။ အပေါ်နှင့်အောက်သို့စုပ်ယူသောအမှုန့် 2/3mm အထိအာကာသကိုညှိ။
လည်ပတ်နေစဉ်နမူနာတွင်ဂီယာဘီးရှိနေသေးပါက (များသောအားဖြင့်၎င်းကိုမထွက်ခင်ချိန်ညှိထားပြီးဖြစ်သည်) ထုတ်ကုန်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အထက်သို့ပါဝါနို့စို့ခြင်းအတွက်အမြင့်ကိုညှိနိုင်သည်။
၁.၁ ထောင့်မှာအခွံမာသီးလေးလုံးကိုလွှတ်လိုက်ပါ။ သတိပေးချက် - အခွံမာသီးလေးလုံးထွက်ပြီးမှသာအမြင့်ကိုညှိပါ။ (ပုံကိုကြည့်ပါ)
၁.၂ အခွံမာကိုလွှတ်ပါ (ပုံ ၁ တွင်ကြည့်ပါ)၊ အပေါ်သို့စုပ်ယူသည့်အမြင့်အတွက်အမြင့်ကိုညှိပါ (၁၊ ၂၁၊ ၂၂ ကိုကြည့်ပါ) ။ သို့မဟုတ် (ပုံ ၁ ကိုကြည့်ပါ) ကွာဟချက်နီးကပ်လာသည်နှင့်လက်ယာရစ်ကိုဖွင့်ပါ။ လက်ယာရစ်လက်ယာရစ်ကိုဖွင့်ပါကွာဟချက်ကျယ်ပြန့်လာပြီ။
၁.၃ အမှုန့်နို့စို့areaရိယာတွင်ကောင်းမွန်သောအခွံမာသီးလေးပွင့်ကိုမျှတအောင်ပြုလုပ်ပါ။ (ပုံ ၁ တွင်ကြည့်ပါ) အနက်ရောင်ဝက်အူများကိုတင်းကြပ်ပါ (ပုံ ၁ တွင်ကြည့်ပါ)
1. အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းတွင်အမှုန့်ကျန်ရှိနေပါကအထက်သို့မော်တာကိုစုပ်ယူသောအမှုန့်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက်ဒဏ်ငွေကောင်းသည် (ပုံ - ၈ ကိုကြည့်ပါ) ။ သို့သော်လေထုစီးဆင်းမှုမြင့်မားခြင်းကြောင့်စက္ကူအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့ချိန်ညှိနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်အမှုန့်အကြွင်းအကျန်ရှိနေသေးလျှင်အမှုန့်အထက်သို့နို့စုပ်နှုန်းမြင့်တက်ပြီးနောက်အထက်သို့နှင့်အောက်သို့၏အမြင့်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ကွာဟချက်အရမ်းကျယ်လွန်းလျှင်, အမြင့်ကိုထိန်းညှိဖို့ယခင်ခြေလှမ်းကိုလိုက်နာပါ။
အမှုန့်တုန်ခါမှုနှုန်းထိန်းချုပ်မှုကိုချိန်ညှိပါ (ပုံ ၂ - ၂၂ တွင်ကြည့်ပါ) ။
၂။ အမှုန့်တုန်ခါမှုနှုန်းထိန်းချုပ်မှုကို (ပုံ II - ၂၂ တွင်ကြည့်ပါ) သင်လိုအပ်ချက်မပြည့်မီအောင်ချိန်ညှိပါ။ လှောင်အိမ်၏ဘယ်ဘက်ရှိဝက်အူကိုချိန်ညှိနိုင်သည် (ပုံကိုကြည့်ပါ) ။
ဖုန်မှုန့်များ၏ထိန်းညှိမှုကိုပိတ်ထား (ပုံ ၂-၁ ကိုကြည့်ပါ)
လှုပ်ခြင်း၏ထိန်းညှိမှုကိုပိတ်ပါ (ပုံ -၂ ကိုကြည့်ပါ။ )
အထက်သို့နို့စို့နေသော power switch ကိုပိတ်ပါ (ပုံ II-7 ကိုကြည့်ပါ)
အောက်သို့နို့စို့နေသော power switch ကိုပိတ်ပါ (ပုံ II-10 ကိုကြည့်ပါ)
ပို့ခြင်းခလုတ်ကိုပိတ်ပါ (ပုံ II-4 ကိုကြည့်ပါ)
၏ switch သည် (ပုံ II-21 ကိုကြည့်ပါ)
အမှုန့်ပို့ဆောင်ခြင်း၏ထိန်းညှိ၏ switch ကို (ပုံ see -15 ကိုကြည့်ပါ)
အဓိကပါဝါ switch ကိုပိတ်ပါ (ပုံ II-2 ကိုကြည့်ပါ)
Control panel ကိုသန့်ရှင်းအောင်ဖုန်အင်္ကျီနှင့်ဖုံးအုပ်ပါ
၁။ အချိန်ကာလတစ်ခုအကြာတွင်လည်ပတ်ပြီးနောက် baffle ကိုဖွင့ ်၍ ထိုတက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းများကို 20 # engine oil ဖြင့်ဖြည့်ပါ။ ကွင်းဆက်အားပျော့နေလျှင်ညှိရန် elastic ဂီယာကိုသုံးပါ။
၂။ glitter နှင့်ပူသောအရည်ပျော်မှုအမှုန့်ကဲ့သို့သောကုန်ကြမ်းများကိုအစားထိုးနေစဉ်အမှုန့်များရောနှောခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်ဤအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုသန့်ရှင်းစေရန် compressed air ကိုသုံးပါ။
စက်တက်ရန်အတွက်ဖွင့်ပါ (ပုံ ၃ ကိုကြည့်ပါ) ။ စက်၏ထိပ်တစ်ဝက်တွင်ရှိသောခလုတ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်ပါကအောက်သို့ကျလိမ့်မည်။
Delivery switch ကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းပါ (ပုံ II-4 ကိုကြည့်ပါ), နှင့်အခြား switch အားလုံးပိတ်ပစ်, ကြိုတင်အပူရုပ်ရှင်ဖြတ်သန်းပါစေ။
2. အကယ်၍ အမှုန့်သည်ယခင်ကဲ့သို့လုံးဝမစုပ်ပါကစက်တက်ရောက်သူလမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာပါ။ သို့မဟုတ်သင်ဤပြproblemနာကိုကိုင်တွယ်ရန် destaticizer တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။
၃။ ဖုန်မှုန့်များရှိပါကသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ အမှုန့်များသည်စိုစွတ်နေပါက၊
4. အကယ်၍ အမှုန့်ပြန်လည်သန့်စင်သောပြွန်ဘလောက်ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဘောင်၏အောက်ခြေကိုကျန်ကြွင်းလက်ထောက်စနစ်အားဖွင့်ပါ။ သို့မဟုတ်အောက်သို့စုပ်နေသောအမှုန့်ကိုစစ်ဆေးပါ၊
စက်၏ထိပ်တစ်ဝက်ရှိ switch ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မည်။
ရှေ့သို့ Full- အော်တိုအပူလွှဲပြောင်းမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်လိုင်း
နောက်တစ်ခု: Nylon Taffeta အတွက်အအေးခံစက်
Iml Label Flexo ပုံနှိပ်စက်
မျက်နှာပြင် Frame ကိုဆန့်စက်
Digital Display Electro Thermal Drying Forn